I-PTFE Envelope EPDM Gasket - CIXI DONGFENG SEALING & PACKING Co., Ltd.
Imvilophi ye-PTFE EPDM Gasket
I-PTFE imvilophu ye-EPDM gasket esebenzisa ibhantshi le-PTFE seyidumile ukuze isetshenziswe ezinsizeni ezonakalisayo ngenxa yemizuzu yayo ephansi. Ukucindezelwa kokuhlala, ukumelana ngokuhamba phambili kokukhubazeka, ukukhubazeka okuphezulu nokukhethwa kwezinto ezahlukahlukene zokugcwalisa ukuqinisekisa ukusebenza okuhle kunoma yiluphi uhlelo lokusebenza oluthile. Isici Somkhiqizo: l Cishe i-100% ukumelana namakhemikhali l Ukumelana namazinga okushisa: -200 ~ + 260 ℃ l Ingcindezi ukumelana: 4Mpa Isicelo PTFE imvilophu gaskets asetshenziswa kakhulu ekudleni nasekusebenzeni inqubo yezimboni ...
Inkokhelo Imigomo: I-Western Union noma i-PayPal, T / T, L /
I-PTFE imvilophu ye-EPDM gasket esebenzisa ibhantshi le-PTFE seyidumile ukuze isetshenziswe ezinsizeni ezonakalisayo ngenxa yemizuzu yayo ephansi. Ukucindezelwa kokuhlala, ukumelana ngokuhamba phambili kokukhubazeka, ukukhubazeka okuphezulu nokukhethwa kwezinto ezahlukahlukene zokugcwalisa ukuqinisekisa ukusebenza okuhle kunoma yiluphi uhlelo lokusebenza oluthile.
l Cishe i-100% ukumelana namakhemikhali
l Ukumelana nokushisa: -200 ~ + 260 ℃
l Ingcindezi ukumelana: 4Mpa
Amaphakethe wemvilophu ye-PTFE asetshenziswa kakhulu ekudleni nasekucubunguleni izimboni lapho ukungcoliswa kwendawo kungavunyelwe. Ifanele ama-alkalis aqinile aphakathi nendawo, uketshezi lwe-cryogenic, umoya-mpilo, igesi le-chlorine njll.